Sony Xperia XA1 Ultra, notsapainay tamin'ny MWC 2017 | Androidsis
Sony Tsy aloky ny inona akory teo amin'ny tsenan'ny telefaona io. Ny mpanamboatra Japoney dia namoy tany marobe niaraka tamin'ny tsipika terminal izay zara raha nisy tsy nitovizany tamin'ny maodely teo aloha momba ny elanelam-potoana avo lenta ary misy tsipika iray eo amin'ny sehatra midadasika izay tsy mahavita firy amin'ny sandan'ny vola raha ampitahaina amin'ny mpifaninana amin'ny haben'ny vahaolana Moto G na Huawei.
Manohy miady amin'ny mpanelanelana amin'ny elakelan-trano ny mpanamboatra ary anio no hitako ny fahatsapako voalohany taorian'ny fitsapana ny Sony Xperia XA1 Ultra, phablet antonony naseho tao amin'ny MWC 2017 ary misongadina noho ny efijery mahagaga sy ny fakantsary mahery.
1 Volavola iray manaraka ny tsipika naterak'ireo teo alohany
2 Toetra teknika an'ny Sony Xperia XA1 Ultra
Volavola iray manaraka ny tsipika naterak'ireo teo alohany
Sony dia tsy nanafana ny fiarovan-doha marobe tamin'ity lafiny ity ary, toy ny mahazatra, ny XA1 Ultra dia nofantsihana tamin'ny maodely teo aloha. Misy fahasamihafana kely ihany satria ny sisin'ny terminal dia misy sisiny boribory kokoa,
Eo amin'ny ilany ankavanana dia misy ny bokotra sy ny bokotra misy ny terminal ary misy ny fanalahidy fanaraha-maso. Ho fanampin'izay dia ho hitantsika koa a bokotra natokana ho an'ny fakantsary, iray amin'ireo fiasa izay efa lany andro fa manome azy miavaka miavaka. Izaho manokana dia tsy manana an'ity bokotra ity mihitsy.
Ny vatana iray manontolo dia vita amin'ny polycarbonate, na dia hitanao aza amin'ny fijerinay horonantsary voalohany, mahatsapa tena tsara ny telefaona eny an-tànana, ary manolotra fikitika tena mahafinaritra.
Mazava ho azy, araka ny antenaina ao amin'ny terminal izay misy efijery lehibe loatra, be dia be ny fitaovana ka mila mampiasa tanana roa ianao mba hampiasa ny Sony Xperia XA1 Ultra.
Toetra teknika an'ny Sony Xperia XA1 Ultra
efijery 6 " miaraka amin'ny fanapahan-kevitra Full HD
Processeur MediaTek 6757 octacore (Helio P20)
32GB fitehirizana anatiny azo itarina
Battery 2.700mAh miaraka amina famahanana haingana, maody STAMINA ary famandrihana adaptive
Fakan-tsary 23MP 1 / 2,3
Fakan-tsary aloha 16MP
Fatra: 165 x 79 x 8,1mm
Milanja: 210 grama
Hita amin'ny loko mainty, fotsy, mavokely ary volamena
Amin'ny lafiny teknika dia miresaka momba ny telefaona iray izay hanakona ny eo anelanelan'ny sehatra avo lenta isika, afaka mamindra izay lalao na rindranasa tsy misy olana, na firy na firy sary no takian'izy ireo.
Ny efijery dia iray amin'ireo mpiorina mazava ao amin'ny Sony Xperia XA1 Ultra. Zavatra antenaina amin'ny phablet. Ny tontonana misy diagonal an'ny 6 santimetatra manolotra loko mazava sy maranitra izay manasa anao hankafy atiny multimedia. Tokony holazaiko fa ny efijery an'ny Sony Xperia XA1 Ultra dia toa tena tsara.
Mazava ho azy, misy ny olana izay mampikaikaika betsaka ary ny fizakantenan'ity telefaona ity. Tsy azoko hoe nanapa-kevitra ny hampiditra bateria iray i Sony 2.700 Mah amin'ny telefaona misy ireto fiasa ireto.
Na inona na inona haingam-pandeha famahanana telefaona, toa fahaleovan-tena tsy dia misy dikany amiko raha raisintsika ny tontolony Full HD 6-inch. Ho hitantsika ny fomba fiheviny rehefa manana fotoana hanaovana famakafakana amin'ny antsipiriany kokoa isika.
Ny hery lehibe hafa dia ny fakantsary izay miakatra ny Sony Xperia XA1 Ultra. Tsarovy fa ny fakantsary mitovy amin'ny Xperia Z5 no misy azy, misy fakan-tsarimihetsika 23 MP misy sensor 1 / 2,3 ″ Exmor RS avy amin'i Sony, ankoatry ny fakan-tsary 16 megapixel front camera Ny zavatra manokana momba ny fakan-tsary any aoriana dia miaraka amin'ny autofocus haingana indrindra manerantany miaraka amin'ny 0.03 segondra, 5x Clear Zoom, ISO hatramin'ny 12800 ho an'ny sary ary ny iSO3200 ho an'ny horonan-tsary, ny fiasa Steady Shot ary Lahatsary horonantsary 4K.
Biby tena izy izay hahafaly ireo tia sary. Tsy fantatray ny vidiny ofisialy na ny daty famoahana an'ity Sony Xperia XA1 Ultra ity, saingy azontsika atao ny manantena ny hahatratra ny tsena mandritra ny telovolana faharoa amin'ity taona ity amin'ny vidiny izay Manodidina ny 400-500 euro izany.
Ary aminao, inona ny hevitrao momba ny telefaona Sony vaovao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony Xperia XA1 Ultra, notsapainay tamin'ny MWC 2017
tsy maintsy biby mandehandeha izany. miaraka amin'ity fakantsary ity. bibilava
Ny fahatongavan'i Android Nougat mankany amin'ny Galaxy S6 sy S6 Edge dia nahemotra any Angletera